Global Voices teny Malagasy » Fantaro ilay bilaogera Yesenia Corrales · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Septambra 2018 9:15 GMT 1	 · Mpanoratra Eddie Avila Nandika Miranah
Sokajy: Antsafa, Hiper-barrio, Mediam-bahoaka
Nandritra ny telo taona, nifantoka tamin'ny fitodihana any amin'ireo faritra mpifanolo-bodirindrina manodidina ny tanàna, toa an'i La Loma, sy ireo faritra hafa ao Kolombia ny tetikasa HiperBarrio  ao Medellin. Na izany aza, asa mafy nataon'ireo mpandrindra ny tetikasa izany, indrindra fa ireo bilaogera vaovao, izay nanampy aina ny tetikasa.
Amin'ny fanarahana ny blaoginy amin'ny ampahany amin'ity tetikasa ity ao amin'ny bilaoginy manokana , tratra ny fanantenany. Araka ny filazan'i Yesenia, anisan'izany ny fahafahana:
Hanana namana mahafinaritra miaraka aminy ao amin'ny Fihaonamben'ny GV Citizen Media i Yesenia, izay hiaraka amin'ireo solontena hafa avy amin'ny tetikasa Rising Voices mba tsy hizara ny fanantenan'izy ireo ho an'ny tetikasa ihany, fa ho an'ny mediam-bahoaka ihany koa na aiza na aiza. Tahaka ny maro amin'ireo mpikambana ao amin'ny Hiperbarrio, mavitrika amin'ny tranonkala media sosialy maro tahaka ny kaontiny Twitter  sy Flickr  izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/21/126436/
 Fihaonamben'ny Global Voices Citizen Media : https://summit2010.globalvoicesonline.org/
 bilaoginy manokana: http://yesualgother.wordpress.com